China Kukosha kwetembiricha uye hunyoro papurazi rehuku Mugadziri uye Mutengesi | HENGKO
Stainless Simbi Firita
Stainless Simbi Tsvina Disc
Stainless Simbi Tsvina Tube
Stainless Simbi Yefaira Refa
Stainless Simbi Yekusefa Makapu
Sinter Stainless Isimbi Firita
Sinter Powder Simbi Sefa
Upfu Sintered Porous Metal Filter Material
Sintered Bronze Firita
Stainless Simbi Mesh Sefa
Air mafuro Silencer
Temp Humidity Dhata Logger
Dova Point Switch Rinofambisa
Temperature Humidity Switch
Tem & Humidity Rinofambisa
Humidity Switch Housing
Diffuser Carbonation Dombo
Beer Kwezvokudya Nemiti Carbonation Stone
Bubble Diffuser Mhepo Dombo
Gasi Detector Gungano
Gas Detector Switch Housing
Gasi Sensor Probe Musangano
Gasi Guruvhimendi Gungano
Inotyisa Simbi Sefa
Humidity sensor IOT mhinduro
Kukosha kwetembiricha nehunyoro papurazi rehuku
Nguva yechando iri kuuya, kuchamhembe nekumaodzanyemba vapinda mwaka unotonhora, kwete vanhu chete vakatonhora, huku ichave "inotonhora". Kupisa ndechimwe chezvinhu zvakakosha izvo zvinogona kusimudzira mwero wekupona uye kutsemurwa kwehuku yehuku mupurazi rehuku, isu tese tinoziva kuti chete munzvimbo chaiyo tembiricha tembiricha ndipo mazai anokura uye pakupedzisira anotsvaira huku. Uye mukuita kwekurera vana vadiki, tembiricha yakanyanya kuderera, vana vacho vari nyore kubata chando nekukonzera manyoka kana zvirwere zvekufema, uye nhiyo dzichaungana pamwechete kuti dzive nekudziirwa, zvichikanganisa kudya uye zviitiko. Naizvozvo, iyo purazi yehuku inofanirwa kuteerera kune tembiricha.
Kupisa kwekushisa uye kutonga muhuku coop:
Iyo tembiricha pazuva rekutanga kusvika rechipiri zera yaive 35 ℃ kusvika 34 ℃ mune incubator uye 25 ℃ kusvika 24 ℃ mupurazi rehuku.
Iyo tembiricha yeaya incubators kubva pamazuva matatu kusvika manomwe ezera yaive 34 ℃ kusvika 31 ℃, uye iwo emapurazi ehuku aive 24 ℃ kusvika 22 ℃.
Muvhiki repiri, iyo tembiricha yekushisa yaive 31 ℃ ~ 29 ℃, uye tembiricha yehuku yepurazi yaive 22 ℃ ~ 21 ℃.
Muvhiki rechitatu, iyo incubator tembiricha yaive 29 ℃ ~ 27 ℃, uye tembiricha yehuku yepurazi yaive 21 ℃ ~ 19 ℃.
Muvhiki rechina, kudziya kweiyo incubator kwaive 27 ℃ ~ 25 ℃, uye iyo yekurima huku kwaive 19 ℃ ~ 18 ℃.
Chick yekukura tembiricha inofanirwa kuchengetwa yakasimba, haigone kuchinja kubva pakati nepamusoro, ichakanganisa kukura kwehuku.
Unyoro huri muchikwere chehuku hunonyanya kubva muhutsi hwemvura hunogadzirwa nekufema kwehuku, hunyoro hwemweya hunyoro pahuku hwabatanidzwa netembiricha. Pane tembiricha chaiyo, hunyoro hwakakwira hune hushoma pane iyo yekumisikidza mirau yemuviri wehuku. Nekudaro kana tembiricha iri yakati rebei, nyama yehuku inonyanya kuvimba nemhepo inopisa, uye hunyoro hwepamhepo hunodzivirira kupisa kwemhepo kwehuku, uye kupisa kwemuviri kuri nyore kuunganidza mumuviri, uye kunyange kunoita tembiricha yemuviri inomuka, ichikanganisa kukura uye kugadzirwa kweza kugona kwehuku. Inowanzotendwa kuti 40% -72% ndiyo humidity yakakodzera yehuku. Iyo yekumusoro muganho tembiricha yekuisa huku inodzikira nekuwedzera kwehunyoro. Iwo mareferenzi data ndeaya anotevera: tembiricha 28 ℃, RH 75% tembiricha 31 ℃, RH 50% tembiricha 33 ℃, RH 30%.
Tinogona kushandisa tembiricha uye hunyoro sensor yekuona iyo tembiricha uye humidity dhata mune yehuku coop, kana tembiricha uye hunyoro hwakanyanya kwazvo kana hwakanyanya, zviri nyore kuti isu titore nguva matanho, sekuvhura iyo yekuzadza feni yemhepo uye kutonhora kana kutora matanho akakodzera kuti urambe uchidziya. Hengko HENGKO® tembiricha uye humidity transmitter dzakateerana zvigadzirwa zvakanyatsogadzirirwa tembiricha uye humidity yekutarisa munzvimbo dzakaomarara. Chaiwo maficha anosanganisira akatsiga emukati nharaunda, kudziyisa, kufefetedza mweya- kutonhodza (HVAC), zvipfuyo purazi, greenhouse, zvemukati madziva ekushambira, uye ekunze kunyorera. Sensor yekuongorora dzimba, yakanaka mweya kubvumidzwa, nekukurumidza kuyerera kwegasi uye hunyoro, nekukurumidza kuchinjana kumhanya. Dzimba dzinodzivirira mvura kuti isapinda mumuviri weiyo sensor nekukuvadza iyo sensor, asi inobvumira mweya kuti upfuure nechinangwa cheiyo kuyera ambient humidity (humidity). Pore ​​saizi renji: 0.2um-120um, Sefa isina guruva, yakanaka yekudzivirira mhedzisiro. Kukura kwepore, kuyerera kwehuwandu kunogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa; yakagadzika mamiriro, compact particle bonding, hapana kutama, ingangoita isingapatsanurike pasi peyakaomarara nharaunda.
51-3, Fu 'muWest Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana mutengo wemutengo, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichave tiri mukati meawa makumi maviri nemana.
© Copyright - 2001-3030: HENGKO.com All rights rights reserved. Hot Products - Sitemap - AMP Mobile
Porous Metal , Stainless Simbi Firita, Humidity Sensor , Sintered Filter , Gasi Detector Dzimba , Sparger